How to fix System Restore? - Open Engineering For Myanmar
Home » ကွန်ပျူတာ » ရွှေကျွန်းသား
» How to fix System Restore?
How to fix System Restore?
PC မှာ Restore Point ဟောင်းတွေ မရှိတော့ဘူး။ Windows ကလည်း Restore Point တွေ နောက်ထပ် ဖန်တီးမပေးတော့ဘူး။ System Restore ကို ဘယ်လို ပြန်ပြင်မလဲ ???
Windows XP နဲ့ Vista မှာ System Restore ဟာ Registry နဲ့ အရေးကြီးတဲ့ System file တွေကို အလိုလျောက် မကြာခဏ ထိန်းသိမ်းထားပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် System Restore က Back up တွေ Restore Point တွေကို ဖန်တီး မပေးနိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိလာတတ်ပါတယ်။
Free Space အလုံအလောက် မရှိတဲ့အခါ။ Restore Point တစ်ခုကို create လုပ်ဖို့ System Partation (သို့) System Drive မှာ အနည်းဆုံး Free Space 200 MB လိုပါတယ်။ တကယ်လို့ Free Space လုံလုံလောက်လောက် မရှိခဲ့ရင် PC ဟာ Restore Point အသစ်တွေကို ဆက်လက် Create လုပ်ပေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ရှိပြီးသား Restore Point တွေကိုလည်း ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
Task Scheduler အလုပ် မလုပ်တဲ့အခါ။ System Restore ဟာ Restore Point တွေကို နေ့စဉ်အလိုလျောက် Create လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ Windows ရဲ့ Task Scheduler ကို အသုံးပြုပါတယ်။ Task Scheduler အလုပ် လုပ်/မလုပ် စစ်ဆေးဖို့ Start ကိုနှိပ်၊ Run မှာ services.msc ကို ရိုက်ပြီး ၀င်ပါ။ Services Dialog Box ပေါ်လာရင် Scroll Bar နဲ့ အောက်ကိုဆင်း၊ Task Scheduler မှာ Right Click နှိပ်ပြီး Properties ကို ရွေးပါ။ Service Status မှာ Start လုပ်မထားသေးရင် Start ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Startup Type မှာ Automatic ကို ရွေးပြီး OK ကို နှိပ်ပါ။
Operating System မရပ်မနား အမြဲအလုပ်လုပ်နေရတဲ့အခါ။ System Restore ဟာ PC ဖွင့်ထားပေမယ့် အလုပ်မလုပ်ဘဲ နားနေတဲ့အချိန် (Idel State)မှာ Restore Point တွေကို အလိုလျောက် အမြဲ ဖန်တီးပေးပါတယ်။ PC ကို အမြဲ ပိတ်ထားရင် ဒါမှမဟုတ် အမြဲအလုပ်လုပ်နေရင် System Restore ဟာ အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
System Restore ဟာ ပုံမှန် အလုပ်လုပ်နေရင်တောင်မှ Restore Point တိုင်းကို အသုံးပြုလို့မရပါဘူး။ Restore Point တိုင်းဟာ ပြည့်စုံတဲ့ Back up တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ Restore Point တစ်ခုစီဟာ ယခင် Restore Point နောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကိုသာ ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ မူလအခြေနေကောင်းတစ်ခုခုကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့ System Restore ဟာ Restore Point တွေအားလုံးကို အသုံးပြုရတဲ့ အခြေနေတွေကြုံလာတတ်ပါ တယ်။ အဲဒီလိုကြုံလာရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ Restore Point တစ်ခုခု ပျက်စီးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် တခြား Restore Point တွေကိုလည်း သုံးလို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်လို့ အလုပ်ဆက်လုပ်ဖို့ Restore Point တစ်ခုမှ မရနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် Restore Point အားလုံးကို ဖျက်ပစ်ပါ။ System Restore ကို Off လုပ်ပြီး ပြန် On ပါ။ Window XP မှာ Start ကို နှိပ်ပြီး Run မှာ sysdm.cpl ကို ရေးပြီး ၀င်ပါ။ System Restore Properties Dialog Box မှာ System Restore Tab ကို နှိပ်ပြီး Turn off System Restore on all drives ဘေးမှာ အမှန်ခြစ်ကလေး ပေးလိုက်ပါ။ Apply ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် စောစောက အမှန်ခြစ်ထားတာ လေးကို ပြန်ဖြုတ်ပြီး OK ကို နှိပ်ပါ။ Window Vista မှာဆိုရင် Start ကို နှိပ်ပြီး sysdm.cpl ကိုရေးပြီး Enter ကို နှိပ်ပါ။ System Protection tab ကို နှိပ်ပြီး ဒါမှမဟုတ် open System Protection ကို ရွေးချယ်ပြီး Local Disk (C:) ဘေးက အမှန်ခြစ်လေးကို ဖြုတ်ပါ။ System Restore Pop-up မှာ Turn off System Restore ကို ရွေးချယ်ပါ။ Apply ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Local Disk (C:) ကို ပြန်စစ်ဆေးပြီး OK ကို နှိပ်ပါ။
(This article is intended for beginners only)